Ikhaya LaseCape Cod EDowntown Napoleon!
Napoleon, Ohio, i-United States
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Nate
Ikhaya lesitayela se-cape cod elilungiswe kabusha edolobheni laseNapoleon! Ibhlokhi nje kude nenkantolo, i-Spengler's Pub, i-Armory, kanye nezindawo zokudlela ezimbalwa uNapoleon azozinikela. Ikhaya lethu linegceke nompheme wangasese, izitezi zokhuni oluqinile, igumbi elikhulu elinophahla lwesonto lombhishobhi, umnikazi wesitezi sokuqala esinobhavu wangasese, inala yamagumbi okulala ezivakashi ezingafika ku-14! Ama-countertops e-Granite anamakhabethe emephu nokuthayela okusha kulo lonke!
Elondolo newashi lasekhaya, indawo yokupaka egalaji, nomoya ophakathi nendawo nakho kuzungeza ikhaya lethu!
Nakuba sinikeza amalineni amasha namashidi kuzo zonke izivakashi, lawa anikezwa ahlanzekile futhi agoqiwe kodwa “angenziwanga”. Siyazicela izivakashi zethu ukuthi zizakhele eyazo imibhede lapho zifika ngamalineni amasha esiwanikezayo. Sibe nezihambeli eziningi ezenza izicelo ezikhethekile kanye nezindawo zokuhlala zelineni futhi sithole ukuthi kungcono kakhulu ukunikeza isivakashi ngasinye isethi egoqwe ngaphambili yamalineni angasetshenziswa nganoma iyiphi imfashini eziyithandayo. Ngiyabonga!
4.69(35 okushiwo abanye)
Ikhaya litholakala kumlando waseWest Washington Street. Umgwaqo unokukhanya kwesitayela sokuvuselela futhi ungaphakathi kwebanga lokuhamba phakathi kwedolobha. Spengler's Pub, The Armory, Elk's Lodge, Lumberyard Winery konke kungaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5 ukusuka ekhaya lethu.
Sitholakala ngokushesha futhi kalula lapho kudingeka. Futhi siphethe inqwaba yamahholo emicimbi kanye nezindawo zokuhlala edolobheni laseNapoleon, ngakho ukufinyelela kithi kulula futhi kuyashesha!